SomaliTalk.com » Masaajidka Abubakar As-saddique ee Minneapolis iyo habeenkii 27 aad ee Bisha barakaysan ee Ramadaan.
Waxaa lasoo gaaray tobankii dhexe Sh. C/risaaq xaashi oo ka mid ah Imaamyada Masaajidka, ahna Sh. Aad looga ixtiraamo Marayka gaar ahaana gobalka Minnesota, Sh. C/risaaq ayaa lagu yaqaanaa wacdi qiiro leh iyo Duruus badan uu Masaajidka uga bixiyo si joogta ah. Sh. C/risaaq ayaa bilaabay laba darsi (Kitaabka Sifatusalaati Nabi, iyo Tafsiirka Quraanka) sidoo kale Sh. Ayaa bixiyey muxaadaraad iyo waanooyin kala duwan. Masaajidka ayaa camiraa sida caadada u ahaan jirtay, waxaana ka socday cibaado kala duwan iyo sadaqa bixin lagu caawinayo Masaajidka ilaa laga soo gaaray tobankii danbe.
Waxaase xusid mudan markii lasoo gaaray habeenkii 27-ka in masaajidka Abubakar ay muslimiintu aad ugu soo qul qulayeen sidii daadkii, rag iyo dumar waxay buux dhaafsheen meelkasta oo banaan, labada dabaq iyo aga gaarkoodana isku si ayaa loogu tukanayey, sida sawirada aad ku arkayso way adkayd in la helo meel qof ku suguudi karo oo banaan arintaasna mahadeeda illaahay ayaa iska leh, waxaase taas kasii daraa markii la tukaday afartii hore, ayaa sidii lagu balan sanaa in habeenkaas la dhamaystiro kala bar kharashka guud ee ku baxa masaajidka lagay aruurintii, dhowr jeer ayaa horay loo iclaanshay in 27-ka lagu soo talagalo si loo aruuriyo Masaajidka kharashaadkiisa, Jameecadana way kusoo tala galeen, sida ka cad jawaabta ay ka bixiyeen.
Ogaysiiska Ciida oo faah faahsan dib ayaan kasoo sheegi doonaa insha allaah, hor dhac ahaanse waxaa lagu tukanayaa Minneapolis Convention Center 8:45am ayaa salaada loo is taagayaa, ciida ka dibna waxaa la isugu tagi doonaa Minnesota Valley fair insha allaah.